PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - U-babes akafisi kumphinde okwe-visa
U-babes akafisi kumphinde okwe-visa
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Front Page - SANDILE MAKHOBA
NGESINYE isikhathi ngivele ngikhumbule ingoma kaprofessor esihloko sithi, “Ubani osinika lento” uma umsebenzi engiwenzayo ungihlanganisa neziphalaphala ezikhalisa abantu umhlaba wonke.
Emasontweni ambalwa adlule ngiphole nentokazi ebizwa ngenational Key Point - lapha ngikhuluma ngobabes Wodumo (24), owaqala kancane edume ethekwini kodwa manje osedume umhlaba wonke.
Le ntokazi, ogama layo langempela ngubongekile Simelane, izalwa elamontville, khona ethekwini. Akekho ongazi ukuthi ubabes udlise kakhulu ngobuhle nangethalente, ikakhulukazi lomdanso futhi naye uyazazi.
Eminyakeni emithathu eyedlule umculo we- hip hop ubushisa izikhotha, wonke umuntu omusha eselandela wona. O-DJ abaningi bashintsha badlala wona lo mculo ngoba i- gqom ne- kwaito kwakungasalandelwa kakhulu.
Bekuthi uma UDJ edlala i- gqom noma i- kwaito kucace nje ukuthi abantu bayabhoreka, baze babuze ukuthi uqeda nini.
Kwathi nje kungazelele muntu kwafika ubabes Wodumo ngengoma yakhe esihloko sithi, “Wololo”, kwaphenduka amatafula njengoba le ngoma yakhe yayiwuhlobo lomculo we- gqom.
Abathandi bomculo nenjabulo bashintsha, banamathela bathi ne kwi- gqom.
Imisakazo eyayingaludlali lolu hlobo lomculo yashintsha yaludlala kakhulu kunakuqala.
Ubabes Wodumo uzishaya isifuba ngokuba yiciko elinomthelela kubaculi abaningi.
“Abangibizi iqueen of Gqom mahhala ngoba ngadlala indima enkulu. Ngisazolilwela futhi
(i- gqom) ngokusebenzisana nozakwethu ukuba liwelele nasemazweni angaphandle,” kusho yena.
AKAFISI KUMPHINDE OKWE-VISA
Ngesikhathi siphole naye ubelungiselela uhambo lwakhe lokuqala oluya phesheya kwezilwandle. Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka owedlule kwabhuntsha uhambo lwakhe lapho kwakumele aye khona kumabet Awards. Ukubhuntsha kwalolo hambo ngenxa yokungalungi kwevisa kwaba yindaba egudwini. Kulokhu ubehluleka ngisho ukuzibamba ngenxa yenjabulo njengoba izinhlelo zokuhamba kwakhe zisheshe zalunga. “Angifuni lutho oluzongihlukanisa nevisa yami manje. Ngonyaka owedlule ngaphatheka kabi umama uzandile Gumede, oyiMeya yetheku, nomasipala sebeze bangenzela umcimbi wokungiphelezela kodwa kwavela ukuthi imvume anginayo yokuya phesheya (Visa),” kusho yena.
Kulokhu ubeqashwe ezindaweni ezimbili, e-united Kingdom nasedublin, e-ireland.
“Lolu hambo lusho lukhulu kimina ngoba abalandeli bami ba- se-uk bahlale befaka izicelo zokuthi ngize ngakhona,” kuchaza yena.
Ubabes akasagcini nje ngokuba yiciko kodwa usenenkampani yakhe ebizwa ngokuthi Wodumo Entertainment, okuyinkampani aqopha ngaphansi kwayo.
“Ngifika ngethulwa yinkampani kamampintsha, iwest Ink Records, okuyiyona eyangakhela igama kakhulu. Ngemuva kokungibona ukuthi sengikhulile unginikeze imvume yokuba ngivule inkampani yami njengoba nginewodumo Entertainment manje,” esho.
Ngaphansi kwenkampani yakhe kusenguyena kuphela umculi okhona kodwa uthi ekuhambeni kwesikhathi uzosayinisa nabanye.
AKAKULUNGELE UKUTHOLA UMNTWANA
Le ntokazi uma uhlezi nayo kuba sengathi kade nazana ngoba ihlala imamatheka kanti ikhonze nokuhleka. Isikhathi esiningi uma engasebenzi uthanda ukuhlala nomndeni wakhe apheke noma aphume ayovakashela abangani.
“Ngiyazifela ngokupheka, angipheki e-studio kuphela kodwa umndeni wami uyasazi isandla sami ekhishini ukuthi sinjani,” esho.
Uma ukhuluma ngeyokuthola umntwana uvele akhuze ibhadi.
“Ngiyabathanda abantwana kodwa njengamanje angikulungele ukuthola umntwana ngoba baningi abantu abangalimala uma ngikhulelwa. Ngisebenza nabantu kanti futhi nginomndeni, konke lokho kumele ngikucabange ngaphambi kokuba ngithole umntwana,” kusho yena.
Akathandanga ukuphumela obala ngezothando, uveze ukuthi lokho kuyimpilo yakhe yangasese.
“Abantu kumele bazi ingoma yami, hhayi indoda yami,” esho.
Kuyona le nyanga (November) uzokhipha ingoma yakhe entsha ezobe idanselwa ngamaholidi, uthi kuyona uhlele ukusebenza nochomee nomshoza.
Njengamanje unengoma apikwe kuyona ngumdidiyeli ohlonishwa izwe lonke, udiplo, esihloko sithi, “Orkant”.
Unezinhlelo zokwenza ingoma nethimba lase-afrotainment. Uthi ubukela kakhulu kulebo Mathosa ongasekho emhlabeni. Ubabes ungene emlandweni womhlaba ngesikhathi ingoma yakhe ipikwa efilimini iblack Panther, esihloko
sithi “Redemption” apike kuyona uzacari okungagcinanga ngayo ngoba newololo yayikhona lapho.
Useke wahlabana ngezindondo ezahlukene okubalwa kuzo ibest Female kumafeather Awards, icoolest Local Female Celebrity ayithole iminyaka emibili ilandelana kwisunday Times Next Generation Awards bese kuba ISABC Song of the Year.
Uthi usahlala ekhaya nabazali bakhe bobabili nodadewabo, unondumiso Simelane, nobhuti wakhe, ukhumbulani Simelane.